China Mpempe Akwụkwọ Mpị China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mpempe Akwụkwọ Mpị - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 20 Ngwaahịa maka Mpempe Akwụkwọ Mpị)
25 Watt Anyanwụ Mpụga Mpempe akwụkwọ Mbupu
Nke a nile na- enwu n'igwe ojii Ezubere iji rịgoro n'elu ogige dị. Okpomoku Okpomoku nke Ochie dị mma maka onye ọ bụla chọrọ ịchọta mmanụ ma ọ bụ ọkụ eletrik ma ọ bụ maka nrụnye ọhụrụ. Igwe ọkụ anyanwụ dị egwu nke a pụrụ iche na nke SMD LED nke na-enye 3750 Lumens na ọnọdụ zuru ezu. Ọkụ ọkụ a na- ere ahịa dị...
150W Na-eburu mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Lot Lot
Nke a 150W Led Retrofit Light Kit na- enye 19500 lumens na 150 watts na ịrịba Lumen arụmọrụ nke 130 lm / W. Ụlọ ahịa anyị na- adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala Lot 150w bụ iji dochie 400W-600W MH / HPS / HID omenala ndị na-edozi ọkụ. 150 Watt Led Retrofit Kit nwere usoro dị jụụ dị mma nke e ji ọkụ ọkụ kpoo ọkụ na onye...
50W Mpempe akwụkwọ ntanetị ọkụ na-ekpuchi
Dochie ochie 175W fixtures na a ike ịrụ ọrụ nke ọma 50W Exterior kanopi Lighting. Ihe mmepụta ya 6000lm bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke oge ochie, na-enwu n'akụkụ nkuku ọ bụla. Nke a nwere ike ịbanye na ya bụ ETL edepụtara maka ya dị ịtụnanya ma dị mma iji ọrụ. Nke a nwere ike ịkụnye ọkụ enwere ike...
Mpempe Akwụkwọ Mpị Mpempe akwụkwọ Mpị Mpempe akwụkwọ dị n'elu Mpempe akwụkwọ na-anọchi ndozi 75w Mpempe akwụkwọ Aluminium Mpempe ọkụ ọkụ Mast dị elu Mpempe akwụkwọ ntanye maka ogige ọkụ Mpempe akwụkwọ n'èzí na-enwu ọkụ